इञ्चन एयरपोर्टमा नांगिँदाको आनन्द ! | Setoshikhar
इञ्चन एयरपोर्टमा नांगिँदाको आनन्द !
सेताे शिखर संवादाता द्वारा ११ श्रावण २०७६, शनिबार १७:५८ मा प्रकाशित
दक्षिण कोरियाको चमत्कारिक विकास देखेर अचम्मै लाग्छ ! जतिपटक त्यहाँ पुगिन्छ, सबै कुरा नौलो र आश्चर्य लाग्ने खालका देखिन्छन् । विज्ञान र विकासलाई सँगसँगै हिडाउन सकेका कोरियनहरुको लगन देखेर नतमस्तक नै हुन्छु । त्यहाँको विकास देखेर डाहा पनि लाग्छ । अलिकति विकास र प्रविधिलाई लुसुक्क बगलीमा कोचेर हाम्रा देशका राजनेतालाई दिउँ कि जस्तो पनि नलागेको होइन । तर, खै मैले त्यो आँट गर्न सकिन कि ? यद्यपि काठमाडौंको सडकमा मेट्रोमा बसेर सयर गर्ने सपनालाई भुल्न भने सकेको छैन ।